अरूचि, कब्जियत, रगत बग्ने, स्वास गन्हाउने समस्याहरूको लागि अमला औषधि – Rastriyapatrika
गर्मि मौससमा धेरै रसिलो फल हो अमला । रसिलो संगै यसले स्वास्थमा धेरै फाईदा पुर्याउछ । ल अमलाको फल खादा मात्र होइन यसको छहारीमा बसेर खादा समेत स्वास्थमा धेरै फाईदा पुग्छ।
भिटामिन सीको मात्रा अत्यधिक हुने भएकाले तपाईंको शरिरलाई ऊर्जावान् राख्न सहयोग गर्दछ । यसले कमजोरी पनि टाढा राख्छ
जाडोमा अमला किन खाने ? जान्नुहोस
१. अमलामा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स लगायतका विभिन्न पोषक तत्वहरु पाइन्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्छ । यसको नियमित सेवनले शरीरको सेल बढाउनुका साथै स्फूर्त पनि राख्छ ।
२. अमलाले कपाललाई पनि निकै फाइदा पुर्याउँछ । यसले कपाललाई बाक्लो, कालो र चम्किलो बनाउँछ । यसले कपाललाई टुक्रनबाट रोक्छ । अमला खानुका साथै कपालमा कुटेर लगाउनाले पनि कपाल राम्रो हुन्छ ।
३. अमलामा पानीको मात्रा हुने भएकाले यसले पिसाबसम्बन्धी समस्या हटाउन मद्दत गर्छ । अमलाले अनावश्यक नून, एसिडलाई पनि पिसाबका माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने गर्छ । यसका कारण युरिक एसिड, मिर्गौलाका समस्या हटेर जान्छ ।
४. रोग प्रतिरक्षात्मक प्रणाली मजबुत बनाउँछ ।. अमलाले आँखाको ज्योति बढाउन मद्दत गर्छ । अमलाको नियमित सेवनले रतन्धो हुन दिँदैन । अमलाको जुसमा थोरै मह मिसाएर पिउनाले आँखालाई एकदमै फाइदा पुग्ने गर्छ ।
६. अमलाले रगतमा चिनीको नियन्त्रण गर्छ । चिकित्सकले समेत मधुमेह रोगका बिरामीलाई अमला खान सल्लाह दिने गर्छन् । अमलालाई मुरब्बा, जुस, अचार जे बनाएर पनि खान सकिन्छ ।
यसले मेटाबोलिज्म बढाएर शरीरलाई तागत दिन्छ । यसमा फाइबर हुन्छ, जसले पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गर्छ । अमला खाँदा कब्जियत, अपच, पखालाजस्ता समस्या समाधान गर्छ ।
७. अमलाको सेवनले अनिद्राको समस्या कम हुन्छ ।
८. कोही मानिस उमेरै नपुगी बुढो देखिन्छन् । अमलाको नियमित सेवनले चाउरिएको अनुहार फुकाउँछ र बुढ्यौलीपनालाई कम गर्छ ।